बेल्जियममा आमा भेटेर फर्किए थिइन् पाँचौ कोरोना संक्रमित, धौलागिरि अस्पतालमा उपचार हुँदै ! - Mitho Khabar
बेल्जियममा आमा भेटेर फर्किए थिइन् पाँचौ कोरोना संक्रमित, धौलागिरि अस्पतालमा उपचार हुँदै !
March 29, 2020 mithokhabarLeaveaComment on बेल्जियममा आमा भेटेर फर्किए थिइन् पाँचौ कोरोना संक्रमित, धौलागिरि अस्पतालमा उपचार हुँदै !
गलकोट – कोभिड–१९ को संक्रमण पुष्टि भएकी बागलुङ नगरपालिकी १७ वर्षीया युवतीलाई धौलागिरि अञ्चल अस्पतालमा ल्याएर उपचार थालिएको छ । घरमै सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएकी युवतीलाई कोरोना पुष्टि भएसंँगै अस्पतालको आइसोलेशन वार्डमा शनिबार भर्ना गराएर उपचार थालिएको अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल सुपरिटेण्डेन्ट डा शैलेन्द्र बी पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
बेल्जियममा आमा रहेकाले दुई महिना घुमेर उनी चैत ४ गते कतार एयरवेजको ‘क्यूआर ६५२’ विमानबाट नेपाल आएकी थिइन् । त्यही विमानमा आएकी १९ वर्षीया काठमाडौँकी युवतीमा कोरोनाको संक्रमण भएको चैत १० गते पुष्टि भएको थियो । त्यसपछि सँगै सवार बागलुङका यिनै किशोरीसहित अन्य तीन जनाको समेत खोजी भएको थियो । (रासस)
चारै कोरोना भाइरस संक्रमितको स्वास्थ्य सामान्य, पहिलो पटक संक्रमण भएका युवा निको भएर घर फर्के
कोरोनाको त्रास बढेपछि धुर्मुश अचानक LIVE मा । सरकारलाई ढाडो प्रश्न ! नेपालीलाई यस्तो सन्देश (भिडियो हेर्नुस्)
२१ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ
पैदल हिँडेर काठमाडौंदेखि वीरगञ्ज आए सराफ